युवतीहरु किन हुन्छन् ‘पानीपुरी’को पारखी ? ‘पानीपुरी’सँग जोडिएका केही रोचक प्रसङ्गहरु « Pariwartan Khabar
युवतीहरु किन हुन्छन् ‘पानीपुरी’को पारखी ? ‘पानीपुरी’सँग जोडिएका केही रोचक प्रसङ्गहरु
5 February, 2018 3:38 pm
‘पानीपुरी’ नेपालमा प्राय युवतीहरुले धेरै रुचाउने गरेको खानेकुरा हो । भारत लगायत विश्‍वभरी नै यो निक्‍कै चर्चित मानिन्छ। विशेष गरी नेपाल र भारतमा पानीपुरीको माग बढ्दो छ। यसको स्वाद चाख्‍न विशेष गरी सडकमा युवतीहरुको लाइन नै लाग्‍ने गरेको छ।
र यही पानी पुरी चर्चित हुँदै विश्‍वभर फरक फरक नामबाट परिचित हुन पुग्यो। यसलाई कुनै ठाउँमा गोलगप्पेको नामबाट चिनिन्छ भने कही पानी पतासेको नामबाट चिनिन्छ।
पानीपुरीलाई सही ढंगबाट बनाएर खाएमा यसले शरीरलाई एसीडिटीबाट राहत दिलाउँछ भने मुडलाई फ्रेस बनाउँछ। यतिमात्रै नभई यसलेसाथीसँगको सम्बन्धलाई झन गाढा बनाइदिने गरेका छन्। यही कारण युवतीहरु प्राय पानी खान पल्किरहेका हुन्छन्। किनकी युवतीहरु साथीसँग रमाउन र मित्रतालाई सधै गाढा बनाइ राख्‍न चाहन्छन्।
यसका साथै यसलाई शरीरको तौल घटाउने वा बढाउने उद्देश्‍यले खानुहुँदैछ भने पनि यसले तपाईलाई फाइदा गर्दैन किनकी यसले न तपाईको तौल घटाउँछ न बढाउँछ। किनकी यो एक प्रकारको जंक फूड पनि हो। – एजेन्सी